Sport – Alpha Premium
Ghani (2022) (App member only) ##unicode Ghaniဇာတျကားမှာတော့ Ghaniရဲ့အဖဟော လကျဝှကေ့စားသမားတဈယောကျဖွဈပွီးတော့ ပွိုငျပှဲမှာဆေးသုံးလှနျကာ သဆေုံးခဲ့ပါတယျ။အဖဖွေဈသူကြူးလှနျခဲ့တဲ့အမှားကွောငျ့ Ghaniနဲ့သူ့အမဟော လူတှရေဲ့လှောငျပွောငျမှုကိုခံခဲ့ရတယျ။Ghaniဟာ အမဖွေဈသူနဲ့လကျဝှဘေ့ယျတော့မှပွနျမကစားဖို့ ကတိပေးခဲ့ပမေဲ့ အရှယျရောကျလာသောအခါ လကျဝှကေို့ဆကျလကေ့ငျြ့ကာ နိုငျငံအဆငျ့ပွိုငျပှဲမှာ အနိုငျရဖို့ ကွိုးစားခဲ့တယျ။ တဈနမှေ့ာတော့ Ghani ၁၅နှဈလုံးမုနျးတီးနခေဲ့တဲ့အဖဖွေဈသူဟာ လူတှထေငျထားသလိုမြိုး ဆေးသုံးစှဲခဲ့တာမဟုတျဘဲနဲ့ လုပျကွံစှပျစှဲခံခဲ့ရတာမှနျး Ghani တဈယောကျသိသှားခဲ့ရတယျ။Ghaniတဈယောကျ သူ့အဖရေဲ့နာမညျဆိုးကို ဘယျလိုပယျဖကျြပေးမလဲဆိုတာ ကွညျ့ရှုကွပါအုံး။ ##zawgyi Ghaniဇာတ်ကားမှာတော့ Ghaniရဲ့အဖေဟာ လက်ဝှေ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ ပြိုင်ပွဲမှာဆေးသုံးလွန်ကာ သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဖေဖြစ်သူကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမှားကြောင့် Ghaniနဲ့သူ့အမေဟာ လူတွေရဲ့လှောင်ပြောင်မှုကိုခံခဲ့ရတယ်။Ghaniဟာ အမေဖြစ်သူနဲ့လက်ဝှေ့ဘယ်တော့မှပြန်မကစားဖို့ ကတိပေးခဲ့ပေမဲ့ အရွယ်ရောက်လာသောအခါ လက်ဝှေ့ကိုဆက်လေ့ကျင့်ကာ နိုင်ငံအဆင့်ပြိုင်ပွဲမှာ အနိုင်ရဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ Ghani ၁၅နှစ်လုံးမုန်းတီးနေခဲ့တဲ့အဖေဖြစ်သူဟာ လူတွေထင်ထားသလိုမျိုး ဆေးသုံးစွဲခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ လုပ်ကြံစွပ်စွဲခံခဲ့ရတာမှန်း Ghani တစ်ယောက်သိသွားခဲ့ရတယ်။Ghaniတစ်ယောက် သူ့အဖေရဲ့နာမည်ဆိုးကို ဘယ်လိုပယ်ဖျက်ပေးမလဲဆိုတာ ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ Review – Myet Chel File Size – 1.2GB,2.4GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL,1080p WED-DL Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Myet Chel Encoded by Arrow ==================================================================== App ...
Kaun Pravin Tambe? (2022) (App only) (free ကြည့်ချင်သူများလဲ app ကနေက်ြညလို့ရပါတယ်) ##unicode Kaun Pravin Tambeဇာတျလမျးကတော့အသကျ41နှဈအရှယျမှာ နိုငျငံလကျရှေးစငျပှဲမှာပှဲဦးထှကျကစားခဲ့တဲ့ CricketကစားသမားPravin Tambeအကွောငျး ရိုကျကူးထားတဲ့ ဇာတျကားလေးဘဲဖွဈပါတယျ။ သာမနျမိသားစုလေးတဈခုမှာ ကွီးပွငျးလာတဲ့ Pravinဟာ Cricketအားကစားကိုရူးရူးမူးမူးနှဈခွိုကျသူပါ။ Ranjiအဖှဲ့မှာကစားရဖို့ကတော့ သူ့ဘဝရဲ့အိမျမကျတဈခုပါပဲ။Pravinဟာ အလုပျမလုပျဘဲCricketကစားနတေဲ့အတှကျ အမဖွေဈသူက အလုပျအငျတာဗြူးအတငျးသှားဖွခေိုငျးလို့ သှားရငျးနဲ့ Orientကုနျသှယျရေးကုမ်ပဏီရဲ့ပွိုငျပှဲမှာ ဝငျကစားရငျး သူဌေးကသဘောကကြာအလုပျနဲ့အသငျးမှာကစားခှငျ့ကိုပါပေးလိုကျခဲ့တယျ။Orientအဖှဲ့မှာကစားနရေငျး Pravinတဈယောကျဟာ သူ့အိမျမကျRanjiအဖှဲ့မှာကစားဖို့အတှကျ အပွငျးအထနျကွိုးစားခဲ့ပါတယျ။ Pravinတဈယောကျအခကျအခဲမြားစှာကို ကြျောဖွတျရငျးသူ့အိမျမကျကိုဘယျလိုအကောငျအထညျဖျောမလဲဆိုတာကို ဒီဇာတျကားလေးမှာ ကွညျ့ရှုကွညျ့ပါအုံး။ ##zawgyi Kaun Pravin Tambeဇာတ်လမ်းကတော့အသက်41နှစ်အရွယ်မှာ နိုင်ငံလက်ရွေးစင်ပွဲမှာပွဲဦးထွက်ကစားခဲ့တဲ့ CricketကစားသမားPravin Tambeအကြောင်း ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။ သာမန်မိသားစုလေးတစ်ခုမှာ ကြီးပြင်းလာတဲ့ Pravinဟာ Cricketအားကစားကိုရူးရူးမူးမူးနှစ်ခြိုက်သူပါ။ Ranjiအဖွဲ့မှာကစားရဖို့ကတော့ သူ့ဘ၀ရဲ့အိမ်မက်တစ်ခုပါပဲ။Pravinဟာ အလုပ်မလုပ်ဘဲCricketကစားနေတဲ့အတွက် အမေဖြစ်သူက အလုပ်အင်တာဗျူးအတင်းသွားဖြေခိုင်းလို့ သွားရင်းနဲ့ Orientကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီရဲ့ပြိုင်ပွဲမှာ ၀င်ကစားရင်း သူဌေးကသဘောကျကာအလုပ်နဲ့အသင်းမှာကစားခွင့်ကိုပါပေးလိုက်ခဲ့တယ်။Orientအဖွဲ့မှာကစားနေရင်း Pravinတစ်ယောက်ဟာ သူ့အိမ်မက်Ranjiအဖွဲ့မှာကစားဖို့အတွက် အပြင်းအထန်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ Pravinတစ်ယောက်အခက်အခဲများစွာကို ကျော်ဖြတ်ရင်းသူ့အိမ်မက်ကိုဘယ်လိုအကောင်အထည်ဖော်မလဲဆိုတာကို ဒီဇာတ်ကားလေးမှာ ကြည့်ရှုကြည့်ပါအုံး။ Review – Myet Chel File Size – 1.2GB,2.6GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL ,1080p WED-DL Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated ...
IMDB: 9.3/10 1,466 votes
Clap (2022) (App member only) ##unicode ဒီတဈခါ တငျဆကျပေးမဲ့ ဇာတျကားကတော့ 2022ထှကျ Telugu ဇာတျကားကောငျးတဈကားဖွဈတဲ့ "Clap" ဆိုတဲ့ ဇာတျကားလေးပါ။ ဒီကားလေးကတော့ drama&sport အမြိုးအစားကို အခြိုးညီညီတှဲစပျရိုကျကူးထားတာပဲဖွဈပါတယျ။ ဇာတျကားခေါငျးစီးက Clap ဆိုတဲ့ လကျခုပျသံ။ ဒီလကျခုပျသံတှရေဲ့နောကျကှယျက ပေးဆပျခဲ့ရတဲ့ သှေးတဈစကျ၊ ခြှေးတဈစကျတိုငျးရဲ့ တနျဖိုးကို ကာယကံရှငျကလှဲ ဘယျသူမှ အတှငျးကကြ မသိနိုငျပါဘူး။ ဒီလို အခြိနျကိုရငျးလို့ ခှနျအားကို အားသှနျခှနျစိုကျ ပေးဆပျခဲ့တဲ့ အပွေးသမားတဈယောကျရှိတယျ။ သူကတော့ ဗဈရျှနူး။ ခနျြပီယံ အပွေးသမားတဈယောကျဖွဈလာဖို့ ရညျရှယျထားတဲ့ ဗဈရျှနူးတဈယောကျ ငယျစဉျကတညျးက အဖဖွေဈသူရဲ့ လကေ့ငျြ့မှုကွိုးဝိုငျးထဲမှာ မရပျမနား အပွေးလကေ့ငျြ့ရငျး ကွီးပွငျးလာခဲ့တယျ။ ဒီလိုနဲ့ တဈနမှေ့ာ ကံကွမ်မာဆိုးတဈခုက သူတို့သားအဖနှဈယောကျအပျေါ ရုတျခညျြးဆိုသလို ကရြောကျလာခဲ့တယျ။ ဒီကံကွမ်မာဆိုးရဲ့ရိုကျခတျမှုက သူ့ဘဝကိုသာမက သူ့ဘဝထဲက တနျဖိုးထားရတဲ့အရာတှကေိုပါ ဆှဲထုတျယူသှားတယျ။ သူ့ဘဝတဈခုလုံး အထိနာသှားခဲ့လတေော့ သူ့နှလုံးသားဟာလညျး အေးစကျငွိမျသကျသှားခဲ့တယျ။ သူ့ရဲ့ဇနီးဖွဈသူက သူ့အနားမှာ မခှဲမခှာရှိနပေမေဲ့လညျး သူကတော့ နီးလကျြဝေးသလို နမေိခဲ့တယျ။ ဒီလိုနဲ့ သူ့မိနျးမနဲ့သူနဲ့ကွားမှာ ...
Lakshya (2021) ##unicode အခုတငျဆကျပေးလိုကျတဲ့ sports drama ဇာတျကားကောငျးမှာတော့ ပါရမီရှငျမွှားပဈအားကစားသမားတဈယောကျရဲ့ခနျြပီယံဖွဈဖို့ကွိုးစားခဲ့ရတဲ့ဘဝဇာတျလမျးနဲ့ ဖွဈလဖွေ့ဈထရှိတဲ့အတိုငျး လမျးမှားကိုရောကျသှားတဲ့အခါ သူ့ဘဝကိုလမျးမှနျရောကျအောငျကွိုးစားခဲ့ရပုံတှမွေငျတှရေ့မှာပါ ပါဒူဆိုတဲ့ကောငျလေးဟာ မိဘတှမေရှိတော့ဘဲ အဘိုးရဲ့လကျပျေါမှာကွီးပွငျးလာခဲ့သူတဈယောကျပါ ပါဒူရဲ့အဖကေ မွှားပဈကမ်ဘာ့ခနျြပီယံဖွဈခငျြခဲ့ပွီး သူ့အဖရေဲ့မဖွညျ့ဆညျးနိုငျခဲ့တဲ့ပနျးတိုငျအိပျမကျကို ပါဒူက ဖွညျ့ဆညျးပေးနိုငျဖို့ သူ့အဘိုးကအိပျမကျမကျခဲ့ပါတယျ ပါဒူကလညျး အဖအေတိုငျးပဲ ငယျငယျကတညျးက မွှားပဈသိပျတျောခဲ့တာကွောငျ့ သူ့အဘိုးက ရှာမှာရှိတဲ့လယျနဲ့အိမျတှအေားလုံးကိုရောငျးခပြွီး ပါဒူကို မွှားပဈသငျတနျးကြောငျးပို့ခဲ့ပါတယျ လောကကွီးမှာ ဒီမွေးနဲ့ဒီအဘိုးပဲရှိကွတဲ့အတှကျ ပါဒူဟာ အဘိုးကိုသိပျတှယျတာခဲ့ပါတယျ ပါဒူတဈယောကျ ပွညျနယျမွှားပဈခနျြပီယံဖွဈပွီး ဘဝတတျလမျးကို ပထမခွလှေမျးစတဲ့အခြိနျမှာပဲ သူ့အဘိုးက ရုတျတရကျနှလုံးဖောကျပွီးဆုံးပါးသှားခဲ့ပါတယျ ပါဒူအတှကျ ကောငျးကငျကွီးပွိုသလိုဖွဈသှားခဲ့ပွီး မွှားပဈအားကစားကို သူအာရုံမစိုကျတော့တဲ့အခြိနျမှာ လမျးမှားရောကျသှားခဲ့တဲ့ ပါဒူရဲ့ဘဝ ဘယျလိုဆကျဖွဈမလဲဆိုတာကိုတော့ ဒီဇာတျကားမှာခံစားအားပေးကွပါဦးနျော ##zawgyi အခုတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ sports drama ဇာတ်ကားကောင်းမှာတော့ ပါရမီရှင်မြှားပစ်အားကစားသမားတစ်ယောက်ရဲ့ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရတဲ့ဘဝဇာတ်လမ်းနဲ့ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့အတိုင်း လမ်းမှားကိုရောက်သွားတဲ့အခါ သူ့ဘဝကိုလမ်းမှန်ရောက်အောင်ကြိုးစားခဲ့ရပုံတွေမြင်တွေ့ရမှာပါ ပါဒူဆိုတဲ့ကောင်လေးဟာ မိဘတွေမရှိတော့ဘဲ အဘိုးရဲ့လက်ပေါ်မှာကြီးပြင်းလာခဲ့သူတစ်ယောက်ပါ ပါဒူရဲ့အဖေက မြှားပစ်ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဖြစ်ချင်ခဲ့ပြီး သူ့အဖေရဲ့မဖြည့်ဆည်းနိုင်ခဲ့တဲ့ပန်းတိုင်အိပ်မက်ကို ပါဒူက ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ သူ့အဘိုးကအိပ်မက်မက်ခဲ့ပါတယ် ပါဒူကလည်း အဖေအတိုင်းပဲ ငယ်ငယ်ကတည်းက မြှားပစ်သိပ်တော်ခဲ့တာကြောင့် သူ့အဘိုးက ရွာမှာရှိတဲ့လယ်နဲ့အိမ်တွေအားလုံးကိုရောင်းချပြီး ပါဒူကို မြှားပစ်သင်တန်းကျောင်းပို့ခဲ့ပါတယ် လောကကြီးမှာ ဒီမြေးနဲ့ဒီအဘိုးပဲရှိကြတဲ့အတွက် ပါဒူဟာ အဘိုးကိုသိပ်တွယ်တာခဲ့ပါတယ် ပါဒူတစ်ယောက် ပြည်နယ်မြှားပစ်ချန်ပီယံဖြစ်ပြီး ဘဝတတ်လမ်းကို ပထမခြေလှမ်းစတဲ့အချိန်မှာပဲ သူ့အဘိုးက ရုတ်တရက်နှလုံးဖောက်ပြီးဆုံးပါးသွားခဲ့ပါတယ် ပါဒူအတွက် ကောင်းကင်ကြီးပြိုသလိုဖြစ်သွားခဲ့ပြီး မြှားပစ်အားကစားကို သူအာရုံမစိုက်တော့တဲ့အချိန်မှာ လမ်းမှားရောက်သွားခဲ့တဲ့ ပါဒူရဲ့ဘဝ ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ ...
Dead & Beautiful (2021) (App only) (free ကွညျ့ခငျြတဲ့သူတှလေဲ app ကနဝေငျကွညျ့လို့ရပါတယျ) ##unicode ဒီတဈခေါကျတငျဆကျပေးမှာကတော့ Dead and Beautiful ဆိုတဲ့အသဈထှကျ Thriller ကားလေးပဲဖွဈပါတယျ ဇာတျလမျးအကွောငျးအရာလေးကတော့ သူဌေးသားသမီးတှဖွေဈတဲ့ အနျနာ မဆေနျ အဲလကျဈ လုလုနဲ့ ဘငျဝေးတို့သူငယျခငျြးတှဟောတဈပတျပွီးတဈပတျအလှညျ့ကစြိတျဝငျစားဖို့ကောငျးတဲ့အရာတှကေိုပွငျဆငျပွီးစမျးသပျကွပါတယျ ဒီလိုနဲ့အနျနာရဲ့အလှညျ့ရောကျတဲ့အခါမှာတော့ အနျနာဟာသူတို့အားလုံးကိုတောတှငျးတဈနရောကိုချေါသှားခဲ့ပါတယျ ဒီလိုနဲ့ညပိုငျးရောကျတဲ့အခါမှာသူတို့ဆီကိုထူးဆနျးတဲ့လူကွီးတဈယောကျရောကျလာပွီးသူ့သှေးကိုဝါးကညျြတောကျထဲထညျ့ပွီး တိုကျသှားပါတယျ သူငယျခငျြးတှအေားလုံးကလညျးအနျနာရဲ့အစီအစဉျတဈစိတျတဈပိုငျးလို့ထငျပွီးသောကျလိုကျပါတယျ အဲ့ဒီနောကျမှာတော့အားလုံးမူးမလေဲ့သှားကွပွီးသတိရလာတဲ့အခါ သူတို့ကိုသှေးတိုကျခဲ့တဲ့အဘိုးကွီးသဆေုံးနတောတှရေ့တဲ့အပွငျ သူတို့သှားတှမှောလညျးအစှယျတှပေေါကျလာတာကိုသိလိုကျရပါတော့တယျ အနျနာတို့အားလုံးဟာသူတို့ကိုယျသူတို့သှေးစုပျဖုတျကောငျဖွဈသှားတယျလို့ ယူဆလိုကျကွပွီးဘေးကငျးတဲ့နရောကိုရှပွေ့ောငျးကွပါတော့တယျ အနျနာတို့သူငယျခငျြးတဈသိုကျတကယျပဲ သှေးစုပျဖုတျကောငျတှဖွေဈသှားကွတာလား တကယျပဲသှေးစုပျဖုတျကောငျတှဖွေဈသှားကွတာဆိုရငျ သူတို့ဘာဆကျလုပျကွမလဲဆိုတာကိုတော့ဇာတျလမျးထဲမှာဆကျလကျစောငျ့ကွညျ့ပေးကွပါဦးနျော ##zawgyi ဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Dead and Beautiful ဆိုတဲ့အသစ်ထွက် Thriller ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာလေးကတော့ သူဌေးသားသမီးတွေဖြစ်တဲ့ အန်နာ မေဆန် အဲလက်စ် လုလုနဲ့ ဘင်ဝေးတို့သူငယ်ချင်းတွေဟာတစ်ပတ်ပြီးတစ်ပတ်အလှည့်ကျစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပြင်ဆင်ပြီးစမ်းသပ်ကြပါတယ် ဒီလိုနဲ့အန်နာရဲ့အလှည့်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ အန်နာဟာသူတို့အားလုံးကိုတောတွင်းတစ်နေရာကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ် ဒီလိုနဲ့ညပိုင်းရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဆီကိုထူးဆန်းတဲ့လူကြီးတစ်ယောက်ရောက်လာပြီးသူ့သွေးကိုဝါးကျည်တောက်ထဲထည့်ပြီး တိုက်သွားပါတယ် သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးကလည်းအန်နာရဲ့အစီအစဉ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလို့ထင်ပြီးသောက်လိုက်ပါတယ် အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အားလုံးမူးမေ့လဲသွားကြပြီးသတိရလာတဲ့အခါ သူတို့ကိုသွေးတိုက်ခဲ့တဲ့အဘိုးကြီးသေဆုံးနေတာတွေ့ရတဲ့အပြင် သူတို့သွားတွေမှာလည်းအစွယ်တွေပေါက်လာတာကိုသိလိုက်ရပါတော့တယ် အန်နာတို့အားလုံးဟာသူတို့ကိုယ်သူတို့သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်ဖြစ်သွားတယ်လို့ ယူဆလိုက်ကြပြီးဘေးကင်းတဲ့နေရာကိုရွှေ့ပြောင်းကြပါတော့တယ် အန်နာတို့သူငယ်ချင်းတစ်သိုက်တကယ်ပဲ သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တွေဖြစ်သွားကြတာလား တကယ်ပဲသွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တွေဖြစ်သွားကြတာဆိုရင် သူတို့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲဆိုတာကိုတော့ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးနော် Review – Phyu Sin File Size – 1.3GB,2.4GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL,720p WED-DL Genre : Drama,Horror,Thriller Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin Encoded by Arrow ==================================================================== App ဒေါငျးရန် App ...
Bartkowiak (2021) (App only) ##unicode ဒီတဈခါကတော့ ပိုလနျအကျရှငျကားတဈကားကို တငျဆကျပေးပါ့မယျ။ MMA fighter တဈယောကျဖွဈတဲ့ ဘတျကိုဝါ့ချဟာ ပွိုငျပှဲတဈခုမှာရှုံးနိမျ့ပွီးတဲ့နောကျ နယျဝေးမှာသှားရောကျနထေိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့ သူ့အဈကိုကားမတျောတဆဖွဈပွီး သဆေုံးသှားတဲ့အခါမှာတာ့ သူ့အဈကိုရဲ့ကလပျကို ဆကျလကျဦးစီးလုပျကိုငျဖို့ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ သူကတော့ ကလပျကိုရောငျးခပြွီး နယျမှာပဲပွနျနဖေို့ဆုံးဖွတျခဲ့ပွီး ကလပျကိုရောငျးခဖြို့လုပျရငျး သူတို့ပတျဝနျးကငျြကမွတှေကေို ကုမ်ပဏီတဈခုတညျးကပဲ လိုကျသိမျးဝယျနတောကို သတိပွုမိရာကနေ သူ့အဈကိုသဆေုံးမှုက မတျောတဆမဟုတျမှနျးသိလာရတဲ့အခါ ဘတျကိုဝါ့ချတဈယာကျ အငျအားကွီးပွိုငျဘကျကို ဘယျလိုရငျဆိုငျသှားမလဲဆိုတာကို ကွညျ့ရှုခံစားပေးကွပါဦး။ ##zawgyi ဒီတစ်ခါကတော့ ပိုလန်အက်ရှင်ကားတစ်ကားကို တင်ဆက်ပေးပါ့မယ်။ MMA fighter တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဘတ်ကိုဝါ့ခ်ဟာ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာရှုံးနိမ့်ပြီးတဲ့နောက် နယ်ဝေးမှာသွားရောက်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သူ့အစ်ကိုကားမတော်တဆဖြစ်ပြီး သေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာတာ့ သူ့အစ်ကိုရဲ့ကလပ်ကို ဆက်လက်ဦးစီးလုပ်ကိုင်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သူကတော့ ကလပ်ကိုရောင်းချပြီး နယ်မှာပဲပြန်နေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ကလပ်ကိုရောင်းချဖို့လုပ်ရင်း သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကမြေတွေကို ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းကပဲ လိုက်သိမ်းဝယ်နေတာကို သတိပြုမိရာကနေ သူ့အစ်ကိုသေဆုံးမှုက မတော်တဆမဟုတ်မှန်းသိလာရတဲ့အခါ ဘတ်ကိုဝါ့ခ်တစ်ယာက် အင်အားကြီးပြိုင်ဘက်ကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်သွားမလဲဆိုတာကို ကြည့်ရှုခံစားပေးကြပါဦး။ Review – Yue Liang File Size – 2GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL Genre : Action,Crime,Sport Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated ...
Toofaan (2021) ##unicode လကျဝှကေ့ားတှကွေိုကျတတျတဲ့ ပရိတျသကျကွီအတှကျ အိန်ဒိယလကျဝှကေ့ားလေးတဈကား တငျဆကျပေးပါ့မယျ။ အာဇဈအာလီက မှတျဆလငျမိဘမဲ့ဂဟောမှာကွီးပွငျးလာတဲ့ သူဌေးကွီးတဈယောကျရဲ့လကျကိုငျတုတျ အကွှေးတောငျးလူမိုကျပေါ့။ လကျဝှထေို့းတာကိုတော့ သူစိတျဝငျစားမိတယျ။ လကျဝှကေို့ နညျးစနဈမှနျမှနျနဲ့ထိုးနိုငျဖို့အတှကျ နာနာပရာဘူဆိုတဲ့ နာမညျကွီးလကျဝှနေ့ညျးပွဆီမှာ သငျယူခှငျ့ရဖို့ကွိုးစားပါတော့တယျ။ နာနာပရာဘူက မှတျဆလငျတှကေိုဆိုရငျ အကွမျးဖကျသမားတှလေို့သာ မွငျတတျတဲ့သူတဈယောကျဖွဈပွီး အာဇဈကလညျး လူဆိုးလူမိုကျဆိုတော့ လှယျတော့မလှယျပါဘူး။တဈနတေ့ော့ အာဇဈအာလီ ရနျဖွဈပွီးဒဏျရာရလို့ ဆေးရုံလာပွရငျးနဲ့ အနျနနျရာဆိုတဲ့ဆရာဝနျမလေးနဲ့ဆုံမိသှားကွတယျ။ အစပိုငျးမှာတော့ အနျနနျရာက လူမိုကျမလို့ကွညျ့မရပမေဲ့ နောကျပိုငျးမှာတော့ အာဇဈအာလီ လကျဝှသေ့မားတဈယောကျဖွဈလာဖို့ သူကပဲအားပေးဖေးမခဲ့တယျ။ ဒီလိုအခကျအခဲတှကွေားကနေ လကျဝှသေ့မားလမျးကွောငျးပျေါရောကျလာတဲ့ အာဇဈအာလီတဈယောကျ ဘယျလိုအတားအဆီးတှကေို ကြျောဖွတျရဦးမလဲ၊ ကံကွမ်မာကရော သူ့ကိုမကျြနှာသာပေးပါ့မလား၊ သူ့အိပျမကျတှရေော တကယျဖွဈလာမှာလားဆိုတာတှကေို စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးကောငျးနဲ့ကွညျ့ရှုကွရမှာပါ ##zawgyi လက်ဝှေ့ကားတွေကြိုက်တတ်တဲ့ ပရိတ်သက်ကြီအတွက် အိန္ဒိယလက်ဝှေ့ကားလေးတစ်ကား တင်ဆက်ပေးပါ့မယ်။ အာဇစ်အာလီက မွတ်ဆလင်မိဘမဲ့ဂေဟာမှာကြီးပြင်းလာတဲ့ သူဌေးကြီးတစ်ယောက်ရဲ့လက်ကိုင်တုတ် အကြွေးတောင်းလူမိုက်ပေါ့။ လက်ဝှေ့ထိုးတာကိုတော့ သူစိတ်ဝင်စားမိတယ်။ လက်ဝှေ့ကို နည်းစနစ်မှန်မှန်နဲ့ထိုးနိုင်ဖို့အတွက် နာနာပရာဘူဆိုတဲ့ နာမည်ကြီးလက်ဝှေ့နည်းပြဆီမှာ သင်ယူခွင့်ရဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်။ နာနာပရာဘူက မွတ်ဆလင်တွေကိုဆိုရင် အကြမ်းဖက်သမားတွေလို့သာ မြင်တတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အာဇစ်ကလည်း လူဆိုးလူမိုက်ဆိုတော့ လွယ်တော့မလွယ်ပါဘူး။တစ်နေ့တော့ အာဇစ်အာလီ ရန်ဖြစ်ပြီးဒဏ်ရာရလို့ ဆေးရုံလာပြရင်းနဲ့ အန်နန်ရာဆိုတဲ့ဆရာဝန်မလေးနဲ့ဆုံမိသွားကြတယ်။ အစပိုင်းမှာတော့ အန်နန်ရာက လူမိုက်မလို့ကြည့်မရပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ အာဇစ်အာလီ လက်ဝှေ့သမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ သူကပဲအားပေးဖေးမခဲ့တယ်။ ဒီလိုအခက်အခဲတွေကြားကနေ လက်ဝှေ့သမားလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာတဲ့ အာဇစ်အာလီတစ်ယောက် ဘယ်လိုအတားအဆီးတွေကို ...
The Match (2021) ##unicode The Match ဇာတျကားကတော့ 1944နှဦေးမှာဖွဈခဲ့တဲ့ ဖွဈရပျမှနျကို ရိုကျကူးထားတဲ့ဇာတျကားဘဲဖွဈပါတယျ။ Adolf Hitlerရဲ့မှေးနပှေဲ့အတှကျ နာဇီတှကေ အကဉျြးသားတှနေဲ့ ဘောလုံးပွိုငျပှဲတဈခုကငျြးပဖို့ဆုံးဖွတျခဲ့တယျ။ ဒီပွိုငျပှဲမှာ နာဇီအသငျးက သခြောပေါကျအနိုငျရပွီး အကဉျြးသားတှအေသငျးကတော့ သခြောပေါကျရှုံးနိမျ့ရမယျလို့ ကွံဆခဲ့တယျ။ ဒါပမေဲ့ အကဉျြးသားအသငျးကို ဦးဆောငျတဲ့ Laslzoက ဘောလုံးကစားတာကြှမျးကငျြပွီးစိတျဓာတျခိုငျမာသူဖွဈပါတယျ။ အတှအေ့ကွုံမရှိတဲ့ အသငျးသားတှေ သခြောသငျကွားပေးပွီး နာဇီအဖှဲ့ကို အနိုငျယူဖို့စိတျပိုငျးဖွတျထားခဲ့တာပါ။ နာဇီတှေ သူတို့အဖှဲ့ကို ကှဲသှားဖို့ ဘယျလိုဘဲဖိနှပျဖိနှပျ Laslzoဦးဆောငျတဲ့ အကဉျြးသားအဖှဲ့ကပိုပွီးစညျးလုံးလာလဖွေဈတယျ။ Laslzoတို့အဖှဲ့ အန်တရာယျမြားတဲ့ ရနျသူနာဇီအဖှဲ့နဲ့ ဘယျလိုယှဉျပွိုငျကစားမလဲဆိုတာ ကွညျ့ရှုကွပါအုံး။ ##zawgyi The Match ဇာတ်ကားကတော့ 1944နွေဦးမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားဘဲဖြစ်ပါတယ်။ Adolf Hitlerရဲ့မွေးနေ့ပွဲအတွက် နာဇီတွေက အကျဉ်းသားတွေနဲ့ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတစ်ခုကျင်းပဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ဒီပြိုင်ပွဲမှာ နာဇီအသင်းက သေချာပေါက်အနိုင်ရပြီး အကျဉ်းသားတွေအသင်းကတော့ သေချာပေါက်ရှုံးနိမ့်ရမယ်လို့ ကြံဆခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အကျဉ်းသားအသင်းကို ဦးဆောင်တဲ့ Laslzoက ဘောလုံးကစားတာကျွမ်းကျင်ပြီးစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာသူဖြစ်ပါတယ်။ အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ အသင်းသားတွေ သေချာသင်ကြားပေးပြီး နာဇီအဖွဲ့ကို အနိုင်ယူဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားခဲ့တာပါ။ နာဇီတွေ သူတို့အဖွဲ့ကို ကွဲသွားဖို့ ဘယ်လိုဘဲဖိနှပ်ဖိနှပ် Laslzoဦးဆောင်တဲ့ အကျဉ်းသားအဖွဲ့ကပိုပြီးစည်းလုံးလာလေဖြစ်တယ်။ Laslzoတို့အဖွဲ့ အန္တရာယ်များတဲ့ ...
Skater Girl (2021) ##unicode လနျဒနျသူဖွဈသူ ဂကျြဆီကာဟာ သူမအဖရေဲ့မှေးရပျမွအေကွောငျးကို အဖိုးဖွဈသူထံမှသိခဲ့ရပွီး ထိုရှာလေးဆီကိုအလညျလာဖို အလုပျကနခှေငျ့ယူလာခဲ့ပါတယျ အိန်ဒိယနိုငျငံတှငျးက ခေါငျခိုကျလှတဲ့ရှာလေးဆီအရောကျလာပွီး ဖခငျဖွဈသူရဲ့နထေိုငျမှုဘဝကို ရငျးနှီးခငျြခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ ဒါပမေယျ့ အဲဒီရှာလေးကိုရောကျသှားပွီးတဲ့အခါမှာတော့ သူနဲ့မထငျမှတျဘဲဆုံမိတဲ့ ပရယျနာ ဆိုသူကောငျမလေးတဈယောကျနဲ့ စကားလကျဆုံကမြိရငျး ဒီရှာလေးမှာ ပွောငျးလဲမှူလေးတဈခြို့လုပျပေးဖို့ကွိုးစားလာမိတဲ့အခါမှာတော့..... အဲဒီလိုပွောငျးလဲမှုတှကေိုလုပျနိုငျဖို သူဘယျလိုတှရေငျဆိုငျကြျောဖွတျသှားမလဲဆိုတာကို စိတျဝငျစားဖှယျရိုကျကူးပွသထားပါတယျ ##zawgyi လန်ဒန်သူဖြစ်သူ ဂျက်ဆီကာဟာ သူမအဖေရဲ့မွေးရပ်မြေအကြောင်းကို အဖိုးဖြစ်သူထံမှသိခဲ့ရပြီး ထိုရွာလေးဆီကိုအလည်လာဖို အလုပ်ကနေခွင့်ယူလာခဲ့ပါတယ် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်းက ခေါင်ခိုက်လှတဲ့ရွာလေးဆီအရောက်လာပြီး ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့နေထိုင်မှုဘဝကို ရင်းနှီးချင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် အဲဒီရွာလေးကိုရောက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာတော့ သူနဲ့မထင်မှတ်ဘဲဆုံမိတဲ့ ပရယ်နာ ဆိုသူကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ စကားလက်ဆုံကျမိရင်း ဒီရွာလေးမှာ ပြောင်းလဲမှူလေးတစ်ချို့လုပ်ပေးဖို့ကြိုးစားလာမိတဲ့အခါမှာတော့..... အဲဒီလိုပြောင်းလဲမှုတွေကိုလုပ်နိုင်ဖို သူဘယ်လိုတွေရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်သွားမလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရိုက်ကူးပြသထားပါတယ် Review – Chuu Chuu File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL,1080p WED-DL Genre : Drama, Family, Sport Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Chuu Chuu Encoded by Arrow
Baggio: The Divine Ponytail (2021) ##unicode 1990ပတျဝနျးကငျြ ကာလတှမှော အီတလီအသငျးရဲ့တိုကျစဈမှာ ဆံပငျရှညျရှညျစတိုငျနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ကစားသမားတဈယောကျကိုမှတျမိကွသေးလား။ ဟုတျပါတယျ သူကတော့ဘကျဂီယိုပါ။ Netflix ကနတေငျဆကျထားတဲ့ ဒီကားမှာတော့ ငယျစဉျ၃နှဈသားအရှယျ ကမ်ဘာ့ဖလားဖိုငျနယျမှာအီတလီအသငျးက ဘရာဇီးကိုရှုံးနိမျ့ခဲ့လို့ သူကွီးလာရငျဘရာဇီးကိုပွနျအနိုငျယူပွီးကမ်ဘာ့ဖလားယူပေးမယျလို့ သူ့အဖကေိုကတိပေးခဲ့တဲ့ ဘကျဂီယိုရဲ့ကလေးဘဝကစပွီး အနားယူတဲ့အခြိနျထိရိုကျပွထားပါတယျ။ ဖခငျဆီကယုံကွညျမှုမရခဲ့တဲ့ ဘကျဂီယိုတဈယောကျ ကစားသမားဘဝမှာလဲအနိမျ့အမွငျ့အတကျအကပြေါငျးစုံနဲ့ဖွတျသနျးခဲ့ရပုံအကွောငျးရိုကျကူးထားတာမို့ ဘောလုံးခဈြပရိသတျတှကွေညျ့ရှုသငျ့တဲ့ဇာတျကားကောငျးတဈပုဒျဖွဈလို့အားပေးကွပါအုံး။ ##zawgyi 1990ပတ်ဝန်းကျင် ကာလတွေမှာ အီတလီအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှာ ဆံပင်ရှည်ရှည်စတိုင်နဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ကစားသမားတစ်ယောက်ကိုမှတ်မိကြသေးလား။ ဟုတ်ပါတယ် သူကတော့ဘက်ဂီယိုပါ။ Netflix ကနေတင်ဆက်ထားတဲ့ ဒီကားမှာတော့ ငယ်စဉ်၃နှစ်သားအရွယ် ကမ္ဘာ့ဖလားဖိုင်နယ်မှာအီတလီအသင်းက ဘရာဇီးကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့လို့ သူကြီးလာရင်ဘရာဇီးကိုပြန်အနိုင်ယူပြီးကမ္ဘာ့ဖလားယူပေးမယ်လို့ သူ့အဖေကိုကတိပေးခဲ့တဲ့ ဘက်ဂီယိုရဲ့ကလေးဘဝကစပြီး အနားယူတဲ့အချိန်ထိရိုက်ပြထားပါတယ်။ ဖခင်ဆီကယုံကြည်မှုမရခဲ့တဲ့ ဘက်ဂီယိုတစ်ယောက် ကစားသမားဘဝမှာလဲအနိမ့်အမြင့်အတက်အကျပေါင်းစုံနဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့ရပုံအကြောင်းရိုက်ကူးထားတာမို့ ဘောလုံးချစ်ပရိသတ်တွေကြည့်ရှုသင့်တဲ့ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်လို့အားပေးကြပါအုံး။ Review – HHA File Size – 1.2GB,2.4GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL,720p WED-DL Genre :Biography, Drama, Sport Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by HHA Encoded by Arrow
Saina (2021) ##unicode ဒီတဈခေါကျတငျဆကျပေးမှာကတော့ Saina ဆိုတဲ့အန်ဒိယဇာတျကားသဈလေးဖွဈပါတယျ ဒီဇာတျကားကတော့ အိန်ဒိယရဲ့ ထိပျတနျးအမြိုးသမီးကွကျတောငျရိုကျအားကစားသမား ဆိုငျနာနဝေယျရဲ့ဘဝဇာတျကွောငျးကိုရိုကျကူးပွထားတာပဲဖွဈပါတယျ ကလေးဘဝကနစေ အရှယျရောကျတဲ့အထိ ဆိုငျနာတဈယောကျ ထိပျတနျးအားကစားသမားတဈယောကျဖွဈလာဖို့ ခကျခကျခဲခဲကွိုးစားခဲ့ရပုံတှေ ကိုယျ့ရဲ့အိပျမကျပနျးတိုငျကိုရောကျဖို့ကွိုးစားရငျး အခကျအခဲတှနေဲ့ကွုံတှရေ့ပုံ ဘဝအနိမျ့အမွငျ့ အတကျအကတြှကေိုစိတျဝငျစားဖှယျရိုကျကူးတငျဆကျပွထားတာပါ ဖွဈရပျမှနျကိုအခွတေညျပွီးရိုကျကူးထားတဲ့ဒီကားလေးဟာစိတျဝငျစားဖို့ကောငျးပွီး ပညာလညျးရတာကွောငျ့ ကွညျ့ရတာတနျမယျ့ အိန်ဒိယဇာတျကားကောငျးတဈကားဖွဈပါတယျ ကွကျတောငျရိုကျအားကစားကို ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ရိုကျကူးပွထားတာမလို့ ဗဟုသုတလညျးရစမေယျ့ ဇာတျကားကောငျးလေးပါ ##zawgyi ဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Saina ဆိုတဲ့အန္ဒိယဇာတ်ကားသစ်လေးဖြစ်ပါတယ် ဒီဇာတ်ကားကတော့ အိန္ဒိယရဲ့ ထိပ်တန်းအမျိုးသမီးကြက်တောင်ရိုက်အားကစားသမား ဆိုင်နာနေဝယ်ရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကိုရိုက်ကူးပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် ကလေးဘဝကနေစ အရွယ်ရောက်တဲ့အထိ ဆိုင်နာတစ်ယောက် ထိပ်တန်းအားကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ ခက်ခက်ခဲခဲကြိုးစားခဲ့ရပုံတွေ ကိုယ့်ရဲ့အိပ်မက်ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့ကြိုးစားရင်း အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရပုံ ဘဝအနိမ့်အမြင့် အတက်အကျတွေကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပြထားတာပါ ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုအခြေတည်ပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ဒီကားလေးဟာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီး ပညာလည်းရတာကြောင့် ကြည့်ရတာတန်မယ့် အိန္ဒိယဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ် ကြက်တောင်ရိုက်အားကစားကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရိုက်ကူးပြထားတာမလို့ ဗဟုသုတလည်းရစေမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ Review – Phyu Sin File Size – 1GB,2.4GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL,720p WED-DL Genre : Biography, Drama, Sport Subtitle : Myanmar Subtitle (softsub) Translated by Phyu Sin Encoded by Arrow
IMDB: 2.6/10 664 votes
Kalathil Sandhippom (2021) ##unicode Kalathil Santhippomဇာတျကားမှာတော့ Ashokနဲ့ Anandက ငယျဘဝတညျးက ခငျမငျလာတဲ့ သူငယျခငျြးကောငျးတှဖွေဈပါတယျ။ နှဈဖကျမိဘတှကေ သူတို့ကို မိနျးမကောငျးလေးတှနေဲ့အိမျထောငျပွုဖို့ တိုကျတှနျးပမေဲ့ Ashokနဲ့ Anandနှဈယောကျလုံးက အမွဲငွငျးဆနျကွတယျ။Ashokမိဘနှဈပါးက Anandကို Ashokအတှကျ ရှာပေးထားတဲ့သတို့သမီးကို သှားကွညျ့ပွီး Ashokလကျခံအောငျ တိုကျတှနျးပေးဖို့အကူအညီတောငျးခဲ့တယျ။ Anandမိဘတှကေလဲ Ashokကို Anandလကျထပျဖို့အတှကျ ဖွောငျးဖဖြို့ အကူအညီတောငျးခဲ့တယျ။ သူငယျခငျြးနှဈယောကျလုံး နှဈဖကျမိဘအသီးသီးက အကူအညီတောငျးတဲ့အတိုငျး ကိုယျ့သူငယျခငျြး သတို့သမီးလောငျးတှကေိုသှားတှခေဲ့ကွပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ပွသာနာအသီးသီးတကျကာ သူတို့နှဈယောကျလုံးရဲ့မင်ျဂလာပှဲက ပကျြသှားခဲ့ပါတယျ။ Ashokနဲ့ Anandတို့နှဈယောကျ သူတို့ရဲ့သကျဆိုငျရာ သတို့သမီးကိုရှာတှပေ့ါ့မလား။နှဈပေါငျးမြားစှာခငျမငျရငျးနှီးလာတဲ့ သူတို့သူငယျခငျြးနှဈယောကျဆကျဆံရေးကရော အပွငျလူတှကွေောငျ့ ပွသာနာတှဖွေဈလာနိုငျမလားဆိုတာ ကွညျ့ရှုကွပါအုံး။ ##zawgyi Kalathil Santhippomဇာတ်ကားမှာတော့ Ashokနဲ့ Anandက ငယ်ဘဝတည်းက ခင်မင်လာတဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဖက်မိဘတွေက သူတို့ကို မိန်းမကောင်းလေးတွေနဲ့အိမ်ထောင်ပြုဖို့ တိုက်တွန်းပေမဲ့ Ashokနဲ့ Anandနှစ်ယောက်လုံးက အမြဲငြင်းဆန်ကြတယ်။Ashokမိဘနှစ်ပါးက Anandကို Ashokအတွက် ရှာပေးထားတဲ့သတို့သမီးကို သွားကြည့်ပြီး Ashokလက်ခံအောင် တိုက်တွန်းပေးဖို့အကူအညီတောင်းခဲ့တယ်။ Anandမိဘတွေကလဲ Ashokကို Anandလက်ထပ်ဖို့အတွက် ဖြောင်းဖျဖို့ အကူအညီတောင်းခဲ့တယ်။ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်လုံး နှစ်ဖက်မိဘအသီးသီးက အကူအညီတောင်းတဲ့အတိုင်း ကိုယ့်သူငယ်ချင်း သတို့သမီးလောင်းတွေကိုသွားတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ပြသာနာအသီးသီးတက်ကာ သူတို့နှစ်ယောက်လုံးရဲ့မင်္ဂလာပွဲက ပျက်သွားခဲ့ပါတယ်။ Ashokနဲ့ Anandတို့နှစ်ယောက် သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ သတို့သမီးကိုရှာတွေ့ပါ့မလား။နှစ်ပေါင်းများစွာခင်မင်ရင်းနှီးလာတဲ့ သူတို့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဆက်ဆံရေးကရော အပြင်လူတွေကြောင့် ပြသာနာတွေဖြစ်လာနိုင်မလားဆိုတာ ...
IMDB: 6.6/10 173 votes